soo dhaweyn | The Seattle Public Library
Soomaali : soo dhaweyn
fariin ka agaasimaha fulinta iyo madaxa maktabadda
Waqtiyada baddelka, waxay u tahay waxtar badan machadyada bulshadda inay dib u xaqiijiyaan cida ay yihiin iyo waxa ay aaminsanyihiin. Waa muhiim inaad ogtahay in Seattle Public Library ay sii joogteyso inay tahay meel soo dhaweyn kuu leh.
Maktabadaha waxay marwalba ku soo dhaweynayeen machadka dhammaan. Jiritaankeena badan waa aasaaska midaan. Seattle Public Library, waxaa jiro madba'a hagida ee la hadlo qiyamkan:
Ixtiraam oo la qabso bulshadda oo dhan.
Waxaan ku dabaaldagnaa kala duwanaanshaha Seattle oo ku dedaalnaa inaan hubino in dadka oo dhan ay ku dareemaan soo dhaweyn Maktabada. Waxaa naga go'an inaan buuxino baahiyaha iyo filashooyinka ee macmiil kastoo Maktabada ah iyaddon loo eegin jinsiyada, qowmiyada, diinta, dhaqanka, dookha galmada, caqiidooyinka, daqliga ama curyaannimada. Seattle Public Library waxay si firfircoon u taageertaa dadaalada la dagaalamo naceybka, cuqdada iyo takoorida.
Markii albaabadeenu ay furanyihiin maalin walba, danaheena kaliya waa kugu soo dhaweyntaada maktabadaheena iyo illaha badan ee noo diyaarsan si aan kugu caawino nolosha.
Waxaan ku faanaa lahaanshaha 27 kayaga maktabadood ee ku yaalo xaafado kala duwan ee caasimada oo dhan si loo hubiyo in adiga iyo qof walba ee bulshadeena - haddii aad tahay isticmaale joogta ah, ardayd, martida, dadka waayeelka, shaqo raadiyaha, muhaajirka ama qaxootiga ama si aan badbaado aheyn loo meeleeyay - leeyahay helitaanka sahlan ee illaheena iyo caawinta takhasuska.
Marka adduunka nagu xeeran isbadelo maalin walba, waxaa jiro hal joogta ah oo halkan kuu taalo adiga - Seattle Public Library. Albaabadeena waxay marwalba u furanyihiin - ma jiro fiiso, xubinnimo ama aqoonsi loo baahanyahay.
Marnaba ha su'aalin, marnaba ha shakiyin. Maktabadaheena waxay u furanyihiin qof walba.
Waxba looma baahno. Ma jiro wax la cadeynayo. Soo dhawow.
Marcellus Turner, Agaasimaha fulinta iyo madaxa maktabadda